Akụkọ - Usoro Mmepụta nke ụlọ ọrụ anyị
Mmepụta Pulp kpụrụ izugbe gụnyere nkwadebe pulp, ịkpụzi, ihicha, ịpị ọkụ na usoro ndị ọzọ.
1. Nkwadebe pulp
Pulping gụnyere nzọụkwụ atọ nke akụrụngwa nkụ, pulping na pulping. Nke mbu, a na -awụsa eriri izizi na pulp mgbe nyochachara na nhazi ọkwa. Mgbe ahụ, a na -akụ pulp ahụ, eriri ahụ na -ekewapụ site na pulper iji meziwanye ike njikọ n'etiti ngwaahịa pulp. N'ihi nha nha, ike na ụcha dị iche iche, n'ozuzu ha kwesịrị ịgbakwunye onye na -ahụ maka ike mmiri, onye na -ahụ maka ihe na ihe mgbakwunye kemịkalụ ndị ọzọ, ma mezie nha nke ịta na uru pH.
Ka ọ dị ugbu a, usoro ịkpụzi pulp anyị bụ usoro ịkpụ oghere. Agụụ na -akpụpụta bụ usoro a na -emikpu ọnwụ nke ala n'ime ọdọ mmiri na -amị amị na eriri ndị dị na ọdọ mmiri slurry na -etinyekọ ọnụ n'elu site na nrụgide wee mechie ọnwụ nke elu. A kwadebere anyị igwe na -ebuli elu na -agbanwe agbanwe, dabara adaba maka imepụta nnukwu nha na nkọwapụta nkọwapụta, ihe ndị dị elu chọrọ nke akwụkwọ dị omimi na ngwaahịa plastik.
Ekwesịrị ka akpọnwụ ngwaahịa nrụgide akọrọ, na -ejikarị ihicha nkụ na ihicha ihe nkiri. Ụlọ ọrụ anyị na -eji akụkụ nke ihicha. Ọdịdị mmiri mmiri nke nwa ebu n'afọ na -akpụpụta nwere ike iru 50%~ 75%, mgbe a na -etinye obi ya n'ime ala wee jikọta ya na nke dị n'elu, mgbe ahụ enwere ike belata ya na 10%~ 12%mgbe akpọnwụchara. Ngwa nrụrụ mmiri adịghị mkpa nkụ.
4. Ịpị ọkụ
Mgbe emechara ngwaahịa ịkpụzi mkpụrụ osisi pulp, a na -ejikwa nnukwu okpomọkụ na nnukwu nrụgide mee ka ngwaahịa ịkpụzi ngwaahịa kọmpat, akụrụngwa ka mma, ma mee ọdịdị na nha nke ngwaahịa ngwaahịa, akwa ọkpụrụkpụ mgbidi, dị larịị elu elu. Usoro ịkpụzi n'ozuzu na-anabata ebu dị elu (n'ozuzu 180 ~ 250 ℃) na pulp nrụgide dị elu iji gbochie ịkpụzi pulp mgbe ihichachara, oge ịpị ọkụ na-adịkarị 30-60s.
5. Ịchacha na imecha ya
Mgbe ngwụcha nke ịpị ọkụ, a ga -ebipụ ngwaahịa ahụ iji nweta ngwaahịa emechara. Mgbe ịkpụchasịchara, a ga -ahazi ụfọdụ ngwaahịa na nhazi post dị ka ndị ahịa si chọọ, dị ka mbipụta pad, ịkwa akwa na ihe ndị ọzọ.
6. Nyocha na nkwakọ ngwaahịa
Mgbe emechara usoro nrụpụta na nhazi niile, anyị nwere ndị ọrụ njikwa njikwa dị mma iji lelee ngwaahịa ahụ, dịka ihe ndị ahịa chọrọ si dị, kpochapụ ụfọdụ ngwaahịa na -erughị eru.
Oge nzipu: Oct-28-2020
Pulp Cup njide, Ejiri Pulp Tray na -acha, Igbe ịchọ mma Mf, Dyeing Kechie Pulp njide, Igbe nkwakọ nri, Nkwakọ ngwaahịa nri katọn,